मान्छे को राय निर्भरता पूर्ण र रंगीन जीवन बिताउन hinders। आउटसाइडर्स, के कसरी हेर्न, खान के, र यति मा लगाउने कि लिन निर्णय गर्न के उहाँलाई गरिदिएको भने यो कसैले रुचि हुनेछ भन्ने असम्भाव्य छ। तर हामी strangulated भइरहेको को खतरा को विकल्प को स्वतन्त्रता subjecting हरेक दिन मदत गर्न सक्दैन भनेर यो छ। एक व्यक्ति कसरी पूर्ण-fledged मुक्त हुन सक्छ र अरूको अधिकार र स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्दैन?
त्यहाँ धेरै सही छ एक वयस्क, आत्म-विश्वस्त व्यक्ति को सही व्यवहार वर्णन, मनोविज्ञान मा "assertiveness" को अवधारणा छ। को प्रतिद्वन्द्वीको लागि सहिष्णुता र आदर देखाउन गर्दा, व्यवहार को एक शैली, चरित्र गुणस्तर यसको पहिचान को सीमाहरु रक्षा र आफ्नो लक्ष्य र चासो रक्षा गर्न आक्रमण बिना एक व्यक्ति सक्षम बनाउँछ - का तथ्यलाई कि assertiveness सुरु गरौँ। मुखर मानिसहरूले विशेषता लक्षण र व्यवहार के के हुन्?
सबै को पहिलो, यी वर्ण को गुणहरू संग एक व्यक्ति, आक्रमण देखाउन छैन।
विभिन्न कुराहरू - यो कि व्यायाम र महसूस ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ तिनीहरूले बाह्य देखिने छैनन् भनेर आफ्नो भावना, राम्रो तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरू हुन्। तर अनुहार को बाहिरी अभिव्यक्ति व्यक्ति भित्र एक आँधी छैन भन्न छैन। मुखर व्यक्ति दुवै बाह्य र आंतरिक तनावमुक्त महसुस हुनेछ।
आत्म र अरूको पर्याप्त धारणा
यो विशेषता पनि एक व्यक्ति assertiveness उपस्थिति संकेत गर्छ। विश्वास छ, गैर-आक्रामक व्यक्ति अरूको भाग मा विभिन्न provocations जवाफ, यो प्रतिद्वन्द्वीको गर्न आयातित गर्दैन अधिकतम आवश्यकताहरु, न त एक अप्रिय कुराकानी लागि कुनै पनि जिम्मेवारी टाढा लिन्छ, र यो बारेमा उसलाई भन्छ। को interlocutor एक यस्तो मनोवृत्ति संग, कुराकानीमा आफ्नो भूमिका गर्न मानिस आफूलाई पर्याप्त सम्बन्धित - कुनै पनि मामला मा, अप्रिय क्षणहरू लागि पूर्ण जिम्मेवारी लिन हुँदैन, र पूर्ण नै यसलाई मुक्त गर्दैन।
आचार स्थिर जागरूकता
यो सुविधा मा ग्रहण र त्रुटिहरू को जागरूकता र द्वन्द्व कमी समावेश गर्नुहोस्। Assertiveness - आफ्नो कार्यहरू एक व्यक्ति एक सही मूल्यांकन छ। यहाँ मुख्य कुरा हो - खर्च भएको समय र आफ्नो कार्यहरूको प्रभावकारिता बुझ्न। तदनुसार, को मुखर व्यक्ति यो अरूले दृश्य बिगार्छ हुनेछ भने पनि, गर्भवती योजना इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ।
द्वन्द्व वा assertiveness?
मनोविज्ञान मा Assertiveness थप द्वन्द्व को अभाव रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। तपाईंले तुरुन्तै त्यहाँ द्वन्द्व नभएसम्म यो हुँदैन कि भन्न सक्छौं, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो धारणा कुनै रक्षा छ। दुर्भाग्यवश, यति धेरै मानिसहरू लाग्छ - आफ्नो चासो र अधिकार मात्र द्वन्द्व मार्फत बचाव गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईं "द्वन्द्व" को अवधारणा उल्लेख गर्न आवश्यक छ। यो तेज र भावनात्मक द्वन्द्व, विरोध चासो, लक्ष्य र राय को मतभेद। यो परिभाषा, यो हेर्न महत्त्वपूर्ण छ भन्ने टकराव, एक द्वन्द्व, सधैं, भावनात्मक प्रभावकारी र तीव्र भनिन्छ जो। यी तीन गुणहरू आधारभूत सुविधाहरू assertiveness गर्न पूर्ण विपरीत - व्यवहार, आक्रमण को जागरूकता र संचार र समग्र अवस्था मा सहभागी पर्याप्त मूल्यांकन को अभाव। हामी मुखर व्यक्ति लामो रूपमा तपाईं द्वन्द्व छैन संलग्न छन् रहन भनेर भन्न सकिन्छ। स्वाभाविक, केही गर्न माथिको व्यवहार ठूलो कठिनाई संग दिइएको छ, त्यहाँ उपस्थित मात्र होइन व्यक्तिगत जिम्मेवारी, तर पनि बच्चा को उचित पालनपोषण हुनुपर्छ।
Assertiveness - समय "कुनै" भन्न सक्ने क्षमता छ
अक्सर हामी तपाईँलाई व्यक्ति "कुनै" बताउन आवश्यक गर्दा यस्तो परिस्थिति संग सामना गर्दै छन्, तर हामी विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो गर्न सक्दैन, र त्यसपछि तिनीहरू यसलाई ग्रस्त। यसको चासो रक्षा गर्न आफूलाई, आफ्नो मान, सम्मान गर्न सिक्न, यो गर्दा केहि मा दिन थाहा महत्त्वपूर्ण छ। Assertiveness - भन्न सक्ने क्षमता छ "छैन।" उदाहरणका लागि, स्थिति: तपाईं पूर्ण बस मा एक हातमा एउटा झोला संग खडा छन्, एक हात ले रेलिंग मा समातेर। बस एक अन्त देखि सञ्चालकको तपाईं अन्य अन्त मा यात्रा यात्रु लागि पैसा पठाउन सोध्छन्। तपाईं आफ्नो हात पालो मा अरू कसैको पैसा मा फोहोर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ छैन, आफ्नो हात व्यस्त छन् र गिर सकिन्छ, र दोश्रो कुरा, पहिले पैसा हस्तान्तरण गर्न सही छ। यो अवस्था आफ्नो चासो रक्षा गर्न इन्कार मा, तपाईं यात्रु र सञ्चालकको, तर अझै पनि पैसा पारित लागि खराब हुनेछ भने, तपाईं dissatisfaction एक भावना र उल्लङ्घन चासो संग बाँकी गरिनेछ। के गर्ने? तपाईं निर्णय!
"कुनै" कसरी भन्न नियम
सबै को पहिलो, तपाईंले संक्षिप्त हुन आवश्यक छ। तपाईं विस्तार कारण व्याख्या गर्न सुरु भने, यो बहाना जस्तो हुनेछ।
यो अन्य पार्टी आदर देखाउन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको प्रशंसा वा मानव कार्यहरू लागि जिम्मेवारी को बोझ shouldering बिना समर्थन गर्न सक्दैन।
कहिलेकाहीं तपाईं बस भन्न आवश्यक "छैन।" हामी त्यो मानिस संग अनुग्रह गुमाएको सोच, शब्द को डर अक्सर छन्। तर दृढ "कुनै" को languid भन्दा धेरै राम्रो र स्पष्ट छ "मलाई थाहा छैन।"
तपाईं इमानदार छ। के तपाईं आफ्नो समय बर्बाद गर्दै किनभने, कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छ। बहाना बनाउन आवश्यक छैन।
कठोरता। तपाईं आग्रहपूर्ण interlocutor पायो, र उहाँले तपाईंलाई समस्या को आफ्नो समाधान सम्भ्काउनु गर्न चाहन्छ भने, तपाईं दृढ बारम्बार "कुनै" धेरै पटक आवश्यक छ।
को अभाव दोषी। आवश्यक तपाईं असहज वा तपाईं आफ्नो इन्कार पछुताउनु गर्छन् भनेर भन्न छैन। तपाईं एक गांठ उठाउनु गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, उसलाई किन क्षमा चाहन्छौं? र vzvalennoy जिम्मेवारी बाट।
आफैलाई हेरचाह। सबै को पहिलो, तपाईंले आफ्नो मानसिक र आध्यात्मिक अवस्थामा सोच्न आवश्यक छ। तपाईं "हो" भन्न भने - अर्थ आफ्नो आकांक्षाओं र चासो दबाउन, यो विपरीत स्थिति लिन आवश्यक छ। यो बलिदान छैन। साँच्चै, कहिलेकाहीं आफ्नो प्रियजनलाई खातिर, हामी महत्त्वपूर्ण कुरा आफूलाई लागि बलिदान। यहाँ आगे गर्न प्राथमिकता को प्रश्न, व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि आउँछ।
neassertivny मान्छे - यो के हो?
neassertivnoe व्यवहार - प्राथमिकता आफ्नो व्यवहार व्यक्तिगत जिम्मेवारी सिद्धान्त छ, हामी त्यहाँ सिक्का अर्को पक्ष हो भनेर बुझ्न पर्छ। अरूलाई मा चरम निर्भरता - यो अत्यधिक कोमलता, सायद आलस्य, एकरूप रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। यो व्यवहार उत्पन्न गर्न सक्छन् जो एक स्थिति विचार गर्नुहोस्:
- एक मानिस मान्छे को एक समूह एक कुराकानीमा एक निष्क्रिय स्थिति लिन्छ;
- यो तपाईं उहाँलाई लागि निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ;
- यो जस्तो देखिने राम्रो कारण द्वारा जिम्मेवारी को एक स्थायी अधित्याग छ;
- एउटा अनुकूल सम्बन्ध सुरु गर्न डराउनु तिनीहरूले प्रयास खर्च गर्न चाहँदैनन् किनभने;
- प्रकट कम आत्म-सम्मान - व्यक्ति अन्य भन्दा कमजोर र खराब महसुस;
- अरूको ध्यान अलग्गै;
- समस्या र जिम्मेवारी को बचाउ आधारित व्यवहार मा ढिला सुस्ती उजुरी गर्नुस्;
- स्पष्ट अन्य खाता मा नहीं ले आफ्नै भावना र चाहना संग सहमत;
- अन्य, र आत्म-हानि असुविधाको डर।
आफ्नो विकल्प अक्सर भित्री आकांक्षाओं contradicts रूपमा मेरो हृदय यस्तो व्यवहार संग एक मानिस, धेरै सास्ती। आफ्नो जीवन तथाकथित नकारात्मक चक्र सुरु हुन्छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? एक व्यक्ति महत्वपूर्ण मानव हल्कासित नलिनुहोस् प्राप्त गर्दछ, यो नै भित्रबाट सुरु Neassertivny आफ्नो क्षमताहरु, व्यवहार, जीवनमा सफलता, आफूलाई लागि जिम्मेवारी कम बारेमा शङ्का संग सास्ती "खान"। यो, यो आफूलाई त्याग्न देखिन्छ किनभने, उहाँले एक डबल जीवन बिताउन थाले: एक हात मा, त्यो अधिक इच्छा र चासो हो, अर्कोतर्फ, उहाँले तिनीहरूलाई व्यक्त सबै गर्न सक्छन् रक्षा छ। यो सबै मान्छे, एक साँचो मित्रता को कमी संग अस्वाभाविक सम्बन्ध सक्छ। Assertiveness - innuendo र conjecture बिना मान्छे को एक प्रभावकारी अन्तरक्रिया छ।
यदि तपाईं दाबी व्यक्ति कसरी थाहा?
सामान्य मनोविज्ञान - सफलता, assertiveness खण्ड सम्झौताहरू प्राणको विज्ञान संग हासिल गर्न आत्म-विश्वास अध्ययन गर्ने समस्या। वर्ण गुणस्तर निर्धारण गर्न, तपाईं, assertiveness लागि एक सानो परीक्षण पास गर्न सक्नुहुन्छ एउटा विशेषज्ञ परामर्श वा दैनिक जीवनमा आफ्नो व्यवहार पालन गर्न। खैर, अवलोकन वा introspection (introspection) को मनोवैज्ञानिक विज्ञान मा उनि अनुगमन सुविधा बारे जानकारी को एक महत्वपूर्ण राशि बनाउन देखि, ठूलो महत्व छन्। त्यसैले, यो महत्त्वपूर्ण ट्रयाक राख्न, तपाईँले "कुनै" तपाईं यसलाई हार्ड संघर्ष बिना शान्तिमा आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न पाउन, र यति मा यदि तपाईं अन्य पक्ष गर्न आक्रमण भने देखिन्छ भन्न रूपमा छ। बाहिर बाट आफैलाई हेर्न सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईंको व्यवहार बारे प्रेम एक को राय छ।
हामीलाई आफ्नो व्यवहार लागि जिम्मेवारी सिद्धान्त के दिन्छ?
व्यक्तिगत पूर्ण विकासको लागि यो दाबी व्यक्ति हुन महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, हामी निहित प्रकृति वा परमेश्वर, आफ्ना आमाबाबुको छ भन्ने तथ्यलाई हामीले जीवनकालमा लागि, सफलता प्राप्त र दोषी बिना हार acknowledging वा द्वारा गठन राख्न कम आत्म-सम्मान। मुखर व्यवहार को सिद्धान्त मा अभिनय, हामी लक्ष्य, हासिल गर्नेछ हाइट्स पुग्न र प्रभावकारी छ पारस्परिक सम्बन्ध।
Gabitarny छवि: एक व्यापार मानिसको बाह्य र आन्तरिक छवि
मनोविज्ञान विषयको। अवधारणा को विकास
वर्ण मनोविज्ञान मा वर्गीकृत छ रूपमा
Dzhon Uotson: जीवनी, फोटो यूहन्ना बी वटसन
नाइट्रेट: मल। कृषिमा आवेदन
शिकार कुकुर अंग्रेजी सेटर (गर्डन सेटर)
उपस्थिति पैसा को इतिहास
Nina Doroshina: जीवनी प्रेम